Sachet Tomato Paste Ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ - China Sachet Tomato Paste Manufacturers
“Best akụrụngwa na-eme ka ihe kasị mma uto!” Anyị nwere njikwa ogo dị elu na igwe ọrụ na-enye ndị ahịa nnukwu ọrụ enyemaka. Anyị na-achọ ịbawanyewanye ahịa na ndị enyi na ụwa iji mepụta ọdịnihu dị mma na ndabere nke uru ahụ. Na mgbakwunye na mado tomato mado, anyị nwekwara ike inye gị sachet tomato mado, anyị tomato tapawa nwere Flat Sachet na Standup Sachet. N'ihi na dị iche iche nha, anyị nwere ike ime 50g 56g 70g 100g wdg ...
70g Sachet Tomato Paste (Ewepụghị Bag)